Czech inkonzo visa izikhungo eMoscow nakwamanye amadolobha Russian
Czech Republic - iyizwe elihle, egcwele amasayithi kanye izikhumbuzo kwamasiko kweziningi ezisekhona kusukela eNkathini Ephakathi. Izivakashi uhlangabezana injabulo engachazeki, ezazihamba emigwaqweni emazombezombe ikota endala ePrague, noma kokuncoma bobunjwa yinqaba kwamabhuloho itshe. Futhi abalandeli wophuzo isiphuzo nje awanakuziziba izinhlobo eziningi Foam Czech, ikakhulukazi njengoba iningi Uhambo kungenziwa wazama ngokuphelele khulula. Esikhatsini lesingetulu nje izinsuku eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa ikhambo, izivakashi isikhathi ukuthatha emashumini ambalwa emakhilomitha emigwaqweni, tikwele kanye amapaki amazing Czech Republic. Uma usuvele ephefumulelwe uhambo esikhathini esizayo, khona-ke kufanele ucabange ukuklanywa Schengen visa, ngaphandle okuyinto uhambo sakho fabulous akulona iqiniso. Yiqiniso, amaphepha adingekayo kungenziwa ekhishwe eziningi izikhungo ezahlukene, kodwa kungcono kakhulu ukwenza lokhu eCzech inkonzo visa sesevisi, ehlinzekwa, kuzoxoxwa ngakho esihlokweni sethu.
izikhungo Visa: izici izici of umsebenzi
bakithi, abahlela indinganiso a emfushane uhambo eCzech Republic, kufanele bathole bona-visa yokuba izivakashi, okuyinto kubanikeza ilungelo ukuze uhlale ezweni izinyanga ezintathu.
Ngaphambili, zonke izindaba visa abathintekayo kulo Consular Section, kodwa kwaba ungakhululekile kakhulu izakhamuzi eziningi Russian. Ngemva kwakho konke, babenelungelo ukuhamba kuzo esifundazweni ibe thutha kwesifunda futhi lapho afake amaphepha adingekayo. Nokho, design okungafanele lokhu noma ukuthi iphepha futhi yafuna uqobo umuntu uya phesheya, okwaphoqa ukuba ahambe emuva endleleni. Ngenxa isithakazelo esikhulu abantu bakithi ukuya Czech Republic ezimbalwa Czech inkonzo visa izikhungo ahlelwa, okuyizona ezibhekana kuphela izibambiso ethola futhi ukukhishwa visa kakade nganamathisela.
Qaphela ukuthi abasebenzi idatha isikhungo asiphindiseli noma yimaphi amasevisi Consulting. Ingani abazange babone ngisho ukhombe wena ukuthi uphethe amaphepha okungewona, luwathathe. Nokho, kungenzeka noma kuphi ngaphandle kokuba athathe uhambo oluya e-visa iye zifinyelelwe iningi izivakashi akhayo kakhulu emzini wami. abahambi kudingeka manje nje ukukhokha zonke izindleko, ukuqoqa amaphepha ayedingeka kakhulu uphinde uzihambise ku Czech inkonzo visa isikhungo.
Iphakheji kwemibhalo visa kuya Czech Republic
Ukuze ukwazi uhambo eside elindelwe, uzodinga ukuhambisa kwisikhungo iphepha ezilandelayo:
isithombe esisodwa ngombala kuze amathathu nesigamu kuya ezine nesigamu;
umshuwalense wezempilo isamba euro ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu;
isiqinisekiso lokubhuka amahhotela, izindlu zezihambi noma amahostela;
isiqinisekiso air travel zombili izinkomba;
Siza nomqashi esho imali zinyanga eziyisithupha ezidlule.
Khumbula ukuthi i-visa kuyokulahlekisela euro ayisithupha. Kuyadingeka ukuba ukukhokhela isevisi eCzech visa isicelo isikhungo. Ungakhohlwa ukuthi khona siqu yomuntu oletha amaphepha adingekayo ukuze ukulethwa ibhayomethrikhi. Lena imfuneko ukuthola Schengen.
Okwamanje eRussia kukhona eziningana Czech inkonzo visa izikhungo, amakheli esizokhuluma aveze zingxenye ezilandelayo kwalesi sihloko. Futhi sizoxoxa umsebenzi wabo wokuziphilisa nowasekhaya izici ekutholeni imibhalo, uma ikhona.
Czech inkonzo visa izikhungo eMoscow
Abaningi bakholelwa ukuthi othile enhloko-dolobha Russian ayizikhungo visa eziningana, lapho ungakwazi bahlelekela imibhalo ukuya eCzech Republic. Kodwa eqinisweni Czech inkonzo visa isikhungo eMoscow wedwa. Itholakala kwi Suschevsky Val, d. 31, k. 2. Eduze metro station "Marina Grove", ngakho ukuthola kulula kakhulu futhi elula isikhungo.
Ngesikhathi Visa Isicelo Centre has website yayo siqu futhi ibhokisi leposi, aphoyintimenti uqhutshwa ngocingo. Khumbula ukuthi phakathi nezinyanga zasehlobo elinde ukuvakasha kungathatha amasonto amathathu ngenxa ukwanda ukugeleza izivakashi kanye ukuminyana izikhungo.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ivuliwe izinsuku ezinhlanu ngeviki kusukela ayisishiyagalolunye ekuseni kwaze kwaba ihora lesine ntambama, kule nkathi yesikhathi Kwenziwa Reception kwemibhalo kanye Ukukhishwa passport ngomumo. Uma udinga baveze i-visa, yokwamukela ngale ndaba babethunywe abayisishiyagalolunye nanye ekuseni.
Izakhamuzi Krasnodar Territory ungaxhumana eCzech inkonzo visa isikhungo e Krasnodar. Telephone lesikhungo ingabonwa kwi website esemthethweni yenhlangano. Kodwa khumbula ukuthi akukho ukubhaliswa kwangaphambilini liyadingeka ukuze afake imibhalo nokuthola imvume passport. Ukwamukelwa wenziwa ulayini nokuthuthukisa ezokuvakasha isizini umsebenzi elinde izikhathi kungathatha eyodwa nengxenye noma ngisho amahora amabili.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ivulwa ayisishiyagalolunye ekuseni kwaze kwaba ihora lesine ntambama, izinsuku ezinhlanu ngesonto, Ukukhishwa passport Kwenziwa parallel yokwamukela imibhalo, lesiniketwe isimo esithile. Yena zilandelwa kuwebhusayithi yayo, yonke imibuzo yakho angabuzwa e call centre, egijima ngesikhathi eMoscow.
Visa Centre isendaweni Komsomolskaya Street, 6a ekhaya.
Visa kuya Czech Republic: ekwakhiweni Saratov
Czech visa inkonzo isikhungo e Saratov isendaweni Vavilov Street, indlu 38/114, 2a ehhovisi. Abantu bendawo ungathola lapha nge-visa yokuba unyaka elilodwa, ngokuvamile kungaba ukuziqhayisa Saratov, yena owayesevele wenza Schengen.
Ukusebenza usuku visa isikhungo Uthatha ayisishiyagalolunye ekuseni kwaze kwaba ihora lesine ntambama. Khumbula ukuthi yokwamukela kwenziwa ngesivumelwano kuphela, ngakho luwukulindelwa neze ihlala imizuzu engaphezu kuka-nanhlanu. kakhulu Inqubo ukulethwa kwemibhalo kuthatha cishe imizuzu emihlanu, futhi uyazicabangela izicelo izinsuku ezine ukusebenza.
Ukusebenza ngesonto sesevisi ihlala izinsuku ezinhlanu, kulokhu eyenziwa yokwamukela amaphepha, ebathumela eMoscow visa Ulungise kokukhipha. Khumbula ukuthi abantu abakhubazekile banelungelo kube maphakathi visa isicelo nge izikhonzi ambalwa.
Ukuvakashela eCzech Republic kusukela Nizhny Novgorod: nezindaba visa
Czech inkonzo visa centre Nizhny Novgorod sinendawo elula kakhulu. Itholakala imizuzu emihlanu nje kuphela kusukela odumile Okthoba Square phezu Osharskaya emgwaqweni, d. 16 Abantu bendawo bathi ukuze lost in search for isikhungo akunakwenzeka ngisho izivakashi.
Kumnandi ukuthi kompheme visa isikhungo ifakwe kummango ukuthi kusiza ukuhamba kwabantu abakhubazekile. Kakade oyedwa inikeza iningi izivakashi kulesi sikhungo baziswa.
Ukuze uthumele iphakethe kwemibhalo visa acoshe zabo zokungena kwamanye amazwe kungaba kusuka ayisishiyagalolunye ekuseni kwaze kwaba ihora lesine ntambama kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. I-Centre isebenza njengoba kokurekhodiwe bese emgqeni bukhoma. Ngakho-ke, izivakashi ngokwabo unqume ukuthi ukubhalisa kusengaphambili noma ulinde isikhathi esingangehora esakhiweni visa isikhungo.
Xhumana inhlangano nge e-mail noma ucingo. Futhi iyatholakala izakhamuzi Nizhny Novgorod kanye call centre, abasebenzi professional izimpendulo ezisheshayo futhi enemininingwane kusikhungo sosizo ukuze yonke imibuzo ephathelene visa ukuze eCzech Republic.
Ufa Czech visa
Izakhamuzi zedolobha futhi abe Czech inkonzo visa isikhungo. Ngo Ufa kungenxa Chernyshevskogo emgwaqweni, ukwakha ayisishiyagalombili nambili. Ukuze afake imibhalo noma ukuthola noma iyiphi passport kudingeka ukuba bakhuphukele ehhovisi ngesikhathi inombolo amathathu namashumi eyodwa.
Kunoma nemini ngokushikashikeka nokukhandleka ngayinye izakhamizi amahlanu endawo ongafaka isicelo kusuka amahora ayisishiyagalolunye nesithupha kosuku. abasebenzi lesi sikhungo sisebenza ngaphandle nekhefu lasemini, ngakho ukuthi abaphila ngaphansi kwazo bonke ezihambayo kuhle okusheshayo. Uma ungenalo isikhathi esiningi khulula ku sokulinda ke wenze aphoyintimenti ngocingo noma kwi-website ye inhlangano. Kulokhu, ungenawo ulahlekelwe imizuzu engaphezu kweyishumi ziqhubeka.
Ukuze kube lula izakhamuzi Ufa usebenza service express, ngoba imali encane ngesikhathi esibekiwe, ehambisa kuzoletha ekhaya lakho noma ehhovisi passport nge-visa wanyathela kuwo.
Isimo yonke imibhalo oluthunyelwe izinombolo babelwe zilandelwa. Kuyinto elula kakhulu, ngoba abantu ngaso sonke isikhathi ukufinyelela ulwazi mayelana nokuthi isicelo yayo sivunyiwe.
Indlela isicelo visa e Samara?
Czech visa sesevisi e Samara usebenzela nesimiso ejwayelekile, ngokuvumelana nemithetho ye izikhungo inkonzo Czech Republic. Ungafaka isicelo kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ukuza isakhiwo singaba ngehora ekuseni eyeka reception obune ntambama. Ukulungiselela passport kwenzeka okufanayo isikhawu sesikhathi. Khumbula ukuthi ezinsukwini olusemthethweni Czech namaholide Russian visa isikhungo ivaliwe. Ngakho-ke, ukufunda samaholide ikhalenda lesikhungo inthanethi ngaphambi kokuya lapho imibhalo iphakethe ukulungele.
Visa Centre isendaweni Michurina emgwaqweni, ngesikhathi inombolo 78, izivakashi kumele ekhuphukela isitezi saleso sakhiwo yesibili bese uya ehhovisi yesibili.
Lapho ukukhipha Schengen Czech Voronezh?
Czech inkonzo visa maphakathi Voronezh Itholakala Voroshilov emgwaqweni, d. 16 Ngokuba kuhanjiswa kwemibhalo kanye kokuthola visa sokugcina, sicela uthintane nehhovisi ngezinsuku zeviki kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ukwemukelwa okufakiwe kule nhlangano hhayi olwenziwa, ngakho sicela ube nesineke futhi uzilungiselele ongamsebenzisa ukukhathazeka elinde okungenani ibe ihora elilodwa. Ukusebenza abasebenzi usuku isikhungo ukuqala ngo ngehora ekuseni uphela ngehora lesine ntambama.
Uma uthumela imibhalo ofake isicelo kumele uvele wena matfupha, isicelo ngeke yamukelwe omunye umuntu, ngisho khona amandla kwasayinwa lommeli. In the isikhungo, ungenza amakhophi amadokhumende, izithombe bese ubamba idatha yebhayomethrikhi inqubo kwezidingo. visa Ready ikhishelwa umuntu ofanayo ebulawa umfakisicelo.
Czech visa sesevisi: Izibuyekezo
Yiqiniso, izikhungo isevisi - ikude ekubeni mkhuba omusha wezwe lakithi, ngakho-ke kungenzeka ukuthola inombolo ezanele amazwana mayelana nomsebenzi wabo. Yini abantu ukubhala mayelana Czech visa isikhungo?
Mhlawumbe abaningi uyoba umangale, kodwa ngokuvamile yabo mass izivakashi kwalezi zikhungo ziyaneliswa kakhulu ngomsebenzi izisebenzi zayo, okuyinto kuhluke nangesizotha, ngezilokotho futhi alungele ukunikela ngayo yonke imininingwane nosizo kungenzeka.
Cishe zonke izikhungo zezinsiza zinakho ukwenza ikhophi esingeziwe imibhalo edingekayo noma izithombe. Ngaphezu kwalokho, kukhona zingahlelwa Health Insurance edingeka kakhulu, ngaphandle kwalokho akunakwenzeka ukuthola ukwamukelwa isicelo.
Izivakashi eziningi enkabeni visa okukhulunywa ukuthi umsebenzi abasebenzi ngokushesha okukhulu, musa ihlabe ikhefu izikhawu eziningana, futhi ukulindela buyafaneleka. Phela, ngisho e-isiqongo izivakashi inkathi kwezivakashi sesevisi iphatha kahle - ezimweni ezingajwayelekile kakhulu, ukulinda cishe amahora amabili bethi kulayini. Kuzo zonke ezinye izinkathi isikhathi ngobukhulu ukulinda isikhathi amahora nesigamu.
Amanye amagama esikhundleni esiphethweni
Sithemba ukuthi i-athikili yethu kuzokusiza uqonde izici sesevisi, futhi ungakwazi kalula ukuthola i-visa ukuze eCzech Republic. Phela, leli elihle sika kunomvuzo ukuchitha isikhathi esincane phezu nokulungisa amaphepha adingekayo. Jabulela uhambo lwakho!
Kanjani ukuze uthole obaleke ezweni lakubo e-Russia? isimo lababaleki Ukraine
Maka weRiphabhulikhi Bashkortostan. Maka kanye elingenamikhono izingalo Bashkortostan (isithombe)
Uhlelo zemizimba federal kwamandla esiphezulu ku Russian Federation
Ukuphila Marine oLwandle Olubomvu
Lapho wathwebula "Oz" (2015)?